Ikhaya AMERICAN STARS I-Marcos Rojo Ingane Yomlando Plus I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeGenius evikelayo eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Becho". I-Marcos Rojo Ingane Yethu Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-Off-Pitch Marcos Rojo Facts
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okuzivikela kodwa bambalwa abecabanga ukuthi i-bio yethu i-Marcos Rojo ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
[Igama eliphelele] UFaustino Marcos Alberto Rojo wazalwa ngo-20th ka-Mashi 1990 eLa Plata, e-Argentina. Uzelwe uCarlina Rojo unina noMarcos Rojo Snr uyise. Wakhulela e-El Triunfo eLa Plata, idolobha elihluphekayo elingu-40 miles ukusuka eBuenos Aires (Idolobha lase-Argentina). Lumuzi owaziwa yizigebengu zakhe zobugebengu ezidume kakhulu kanye nezakhamuzi ezithandwa yibhola.
Ngesibindi sokumenza aqede umsebenzi wakhe endaweni engeyona icala lobugebengu eLa Plata, abazali bakaMarcos bamyisa e-Estudiantes LP lapho ebhaliswe khona njengomfana webhola lezinsizwa ngesikhathi eseneminyaka engu-12. Ngezansi umdwebo omangalisayo womlando wesiphepheli uthatha izinyathelo zakhe zokuqala emdlalweni omuhle njengomntwana.
Njengoba uMarcos Rojo ebeka, ... "Ngesikhathi ngiqala ukudlala ibhola, ubaba wayengenayo imoto. Wayengumuntu ompofu futhi ukuqeqeshwa kwami ​​kwakungasondelene kakhulu nendlu yethu. Ngakho kwadingeka sihambe ngebhayisikili. Sobabili sasihamba ngebhayisikili isikhathi eside. Ubaba wayevame ukuthengisa izinto emgwaqeni futhi uzobuya ukuze angikhuphule ekhaya uhambo. Kwaba luhambo olude kakhulu futhi ngizofudumala kakhulu ngenkathi eqhuba ibhayisikili lakhe! ". I-Rojo kwadingeka ijikeleze ekuqeqesheni, uhambo olujikelezayo lwama-20 amakhilomitha ukusuka ekhaya ukuya endaweni yokuqeqesha. Wenza imihlatshelo eminingi ukuze aqaphele iphupho lakhe lokuba ngumdlali webhola lezinyawo.
"Ngangibona uthando lwakhe," kusho uRojo Snr (uyise). "Ngangikubona futhi ngizibonele kuye ngoba uzohamba nayo yonke ibhola. Wayehlala ehluke njalo kwabanye abafana beminyaka yakhe. " Umqeqeshi osemusha we-club (Estudiantes) uGabriel San Millan wabuye wabona ukuthi uMarcos wayenamandla futhi wasiza ukuthuthukisa ithalenta lakhe eqenjini lakhe lokuqala lochwepheshe. "Ngempela, wayengumdlali omuhle," kusho uSan Millan. Waqhubeka ..."Wayenamakhono amahle kanye nesisekelo esihle. Kodwa into ehlala ikhona ngaye yayiwukuthi isifiso sokuhlale senza kangcono. Ukuziphendukela kwemvelo kukaMarcos Alonso kwaba mnandi. Ngesikhathi eseyi-18 noma i-19, waqala ukuthuthukisa ngokomzimba.
Ekupheleni kweminyaka yakhe yentsha, uMarcos wayesevele edlala nendawo, u-Estudiantes, ose-Argentinian First Division. Iminyaka engu-10 ubudala kaMarcos yahlushwa ukulwa futhi yayeka isikole ekuseni. Kuningi lokuphanga, ukulwa nokufa. Ibhola laliyisindisi sakhe. Wayehlale ebhola ibhola kusukela engumfana omncane. Ibhola njalo, imini nobusuku. Izikhathi eziningi, uMarcos wayezobhekana nokulwa. Uthukuthela kakhulu futhi unengxabano kakhulu. Kuyinto evamile kulezi zitaladi. Kumele ube namandla.
Ngemuva kokuwina iCopa Libertadores eminyakeni eyishumi eyedlule, uMarcos wathuthela eSpartak Moscow, kuthiwa, Sporting Lisbon. Wenza uphawu lwakhe ekupheleni kwe-2014 World Cup eBrazil njengoba i-Argentina yahamba yonke indlela ngaphambi kokuba ilahlekelwe kancane eJalimane. Lokhu kwaholela kukholi evela Man United. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
U-Rojo ushadile no-Eugenia Lusardo, oyisibonelo se-lingerie esiseLisbon. Bobabili abathandi bahlangana futhi bathandana ngenkathi uRojo e-Sporting CP. U-Eugenia njengoba ngaleso sikhathi wayesebenza e-Lisbon-based firmerie ebizwa ngeDama de Copas. Ngempela ungumuntu, owesifazane ohloniphekile.
Lo mbhangqwana unendodakazi ebizwa ngokuthi iNkosi (abayithandana ngokuthi 'Ngaphezu').
Ukuphila kukaRojo ngesoka eliyingqayizivele intombazane u-Eugenia Lusardo ungaphandle kwezwe lase-Argentine elithuthukisiwe kumabarrio ompofu.
I-Affair: Ngenyanga kaDisemba 2014, uRojo wahlangana nomfazi ayehlangane naye ebusuku. Umsolwa ngokumangalela futhi wakhipha umyalo wokuyeka amaphephandaba ashicilele igama lakhe endabeni. Umyalo egameni lakhe waphakanyiswa ngo-Ephreli 2015 ngenxa yokukhathazeka ukuthi abanye abashayeli bebhola bangase basolwa ngale ndaba, kodwa kusekhona ukuvimbela ukukhululwa kwezithombe zikaRojo.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Ibhola lilondoloze uMarcos kusukela emigwaqweni enzima yase-El Triunfo futhi uphakamise umndeni wakhe ekuhluphekeni. Ngaphansi kwesithombe sikaMarcos noMama wakhe, uCarlina ongumzuzi omkhulu kunomcebo wakhe nangempumelelo yakhe.
UMarcos Rojo Snr, owaziwa ngegama elithi 'Titi', wayengumdlali we-amateur no-El Cruce futhi wasiza ukushaya indodana yakhe emdlalweni ngesikhathi esencane. Ubaba wakhe wenza kuphela i-£ 2.50 ngosuku njengomdayisi we-corner churros, okwakudingeka akwanele ukondla uMarcos nabantakwabo abane - uFranco nodade abathathu - noNoelia, Micaela noSol. Ngaphansi kwesithombe sikaMarcos nabantakwabo abathathu phakathi nezinsuku zabo zobuntwana.
Udumo lukaMarcos Rojo nenhlanhla liye lashiya umndeni wakhe ekhaya liyesaba ukuthi lizobulawa. Izigebengu e-Argentina sezivele zishaya ubaba wakhe futhi zifaka isibhamu enhloko kanina. Elinye ilungu legciwane elibhekene nelokudlwengula emzini wakhe osemncane usongela ukubulala udadewabo oneminyaka engu-9 uSol noNkulunkuluson, oneminyaka elilodwa ubudala.
Babe nethemba lokuthola izandla zabo kwezinye izigidi zamaphilisi aphindaphinda azibuyisele kubathandekayo bakhe. Lokhu kwafika lapho imali yakhe enkulu kakhulu ehola imali yenziwe ngumphakathi nge-Old Trafford. Umfowabo kaMarcos uFranco noDade Noelia bakhulume ngesibindi ngokuthi umndeni ukwesaba ukuthi bayisisulu sokuphumelela kukaMarcos ensimini
Kuxoxwa okukhethekile neThe Sun, batshele ukuthi kusukela ejoyine uMut Utd ngo-Agasti, umndeni ushiye ukuphendula umnyango wabo futhi uqinisekise ukuphepha. Ekhuluma emzini wakhe eLa Plata, uNoelia wathi: "Sihlale siyesaba. Basitshela ngenxa kaMarcos. Bayazi indlu, wonke umuntu uyazi. Kufanele sithathe zonke izinyathelo futhi thina
ungaphenduli umnyango kunoma ubani. Kwakudingeka sigqoke imigoqo kuwo wonke amafasitela ethu - ngaphambili, ngemuva nangeminyango ephezulu. Kuyingozi ukuba ngumndeni kaMarcos Rojo. Kodwa asiyikushiya ngoba leli yikhaya lethu. " Wathukuthela kakhulu ngokuhlaselwa kwamagciwane ekhanda likayise nomama wakhe ukuthi uthumele isithombe kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter ebonisa ukuthi kwenzeke yini ukuhlukumezeka. Phakathi naleso sikhathi, uMarcos othukuthele wayecele amaphoyisa ukuba athole izigebengu - zona
akakaze - futhi wathatha e-Twitter ukusola abahlaseli.
Ngisho nalapho umndeni wakhe usuka endlini yabo, basalokhu behlala esinye isisulu
isakhiwo esisha sokukhipha imali kubo. Kuyinto efanelekile ukuphawula ukuthi ngesikhathi uMarcos ejoyina u-United ehlobo, lesi sabelo sasiqhutshwa ngenxa yezinkinga zomsebenzi ezibangelwa izinsolo zokuhlasela emzini wakubo.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts - Ukusingatha Izimo Ezilahlekile
UFranco umfowabo wathi ...: "Wayelokhu efuna ukuba yiVeron futhi wayezenza sengathi uyena lapho edlala ibhola endlini. UMarcos uzokuhlala egumbini eyedwa ngamalanga ngesikhathi iqembu lakhe lihluliwe emdlalweni obalulekile. Ngemuva kokuthi i-Argentina ilahlekelwe yiJalimane ekugcineni kweNdebe Yomhlaba ye-2014, uMarcos wayengeke akhulume noma abone noma ubani cishe isonto. Angakhathazeka izinsuku eziningi. Uhlala ethukuthele. Ngalesi sikhathi, udinga ukushiywa yedwa bese ebuya ezolile. Ngemuva kweNdebe Yomhlaba, kwamthatha cishe izinsuku ezinhlanu. Uvula ifoni yakhe futhi akhulumi nanoma ubani. Kodwa akuzange kwenzeke eManchester United, okwamanje. "
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts - Ukuphikisana
UMarcos wake wabangela ukuphikisana ngemuva kokuthumela isithombe sezidakamizwa uPablo Escobar ekhasini lakhe le-Instagram ngamazwi: "Yilabo kuphela abalambele nami futhi bemi lapho ngibhekene nesikhathi esibi esikhathini esithile ekuphileni ngizodla etafuleni lami."
UMarcos, lapho ephikisana naye, uthe lesi sikhundla asiyona into enkulu futhi senezela: "Ngifaka isithombe ngoba ngithande leli zwi namazwi." I-Peharbs, hUyabona indaba yokuphila ka-Escobar ku-TV futhi uyayithanda imishwana. Akusho. Eqinisweni, usekela lokho akwenzayo. Kodwa-ke, naphezu kokuphumelela kwakhe, uMarcos akazange akhohlwe izimpande zakhe futhi wenza isiqiniseko sokuthi wonke umndeni wakhe uzuze empumelelweni yakhe.
Lokhu kungenzeka ukuthi kwakungeke kwenzeke uma elandele enye inkanuko yakhe ekuphileni 'ukucula'. UMarcos wayefuna ukuba ngumculi uma engeke abe ngumdlali webhola lezinyawo. Empeleni, uhlabelela futhi udansa kuwo wonke amaqembu, yonke imicimbi yomndeni.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
UMarcos Rojo unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla kaMarcos Rojo: Unesihawu, ubuciko, enembile, enobumnene, ehlakaniphile futhi emculweni omkhulu (ithalenta lakhe lokuqala ngaphambi kwebhola).
Ubuthakathaka bukaMarcos Rojo: Ukungakwazi ukulawula ukulahlekelwa.
Yini uMarcos Rojo ayithandayo: Ukuba yedwa, ukulala, umculo, uthando, imidiya ebonakalayo nokubhukuda.
Yini uMarcos Rojo ayithandi: Abakwa-mediocres, abagxekwa, okwedlule babuyela ekumkhohliseni nobudlova nganoma yiluphi uhlobo.
UMarcos unobungane kakhulu, ngakho-ke bavame ukuzitholela enkampanini yabantu abahluke kakhulu. Uyaziqhenya futhi uzimisele njalo ukusiza abanye, ngaphandle kokufuna ukuthola lutho.
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukudla Banana
UMarcos Rojo unikeze elinye lamaphuzu amakhulu okukhuluma omunye weManchester United 's Europa League noDostov - ngokudla ibhanana emotweni!
Bekuyi Jose Mourinhoohlangothini lwabadlali abaqhubekela phambili ku-quarter-finals lomncintiswano 2-1 ngokubonga ngenxa Juan Mata isiteleka sesibili sesigamu. Bobabili amaqoqo amaFolishi ashiywe amanga ngesikhathi u-Ashley Young ebonakala ehambisa iRojo ibhanana elihlutshiwe ukuze adle ngenkathi esenkundleni yokudlala.
Jose Mourinho wavuma ukuthi lokhu kwenzeka okungavamile ngenxa yokukhathala, isici esingaba nendima ekhulayo phakathi kwamanje nokuphela kwenkathi.
UMourinho utshele BT Sport: "UMarcos wayekhathele izikhathi eziningi. Uyazi umzimba wakhe udinga okuthile. Wabe esecela ibhanana. Isimo sebhanana asiyinto ehlekisayo nhlobo, kufanele sihloniphe isimo somzimba womdlali. "
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -tattoo
I-Rojo ingakwazi ukukhuluma isiNgisi, ngokusho kwezithombe zomlenze, ezifunda 'Ukuziqhenya' nokuthi 'Udumo'.
Unamanye ama-tattoos amaningi, futhi:
UMarcos Rojo Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukukhishwa kweRabona
kodwa ukwahlulela ngalokhu 'Rabona'ukuvota eNdebe yoMhlaba ayinakho ukuzethemba okukhulu ezinyaweni zakhe zokunene. UMark Lawrenson usikisela ngokusikisela ukuthi "wayezobheka imbongolo" uma engayidlulisa.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Marcos Rojo Ingane Yethu Yobuntwana kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.